कोरोना अपडेटको लाइभबाट भावुक हुँदै बिदा भए ‘डा. विकास देवकोटा’ |कोरोना अपडेटको लाइभबाट भावुक हुँदै बिदा भए ‘डा. विकास देवकोटा’ – हिपमत
कोरोना अपडेटको लाइभबाट भावुक हुँदै बिदा भए ‘डा. विकास देवकोटा’
७६ दिनदेखि दैनिक दिउँसो ठिक सवा चारबजे कोरोना अपडेटको लाइभ लिएर आउने स्वास्थ्य तथा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटालाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देवकोटालाई सरुवा गर्दै नयाँ प्रवक्ताको रुपमा परोपकार प्रसूति अस्पतालका निर्देशक डा. जागेश्वर गौतमलाई नियुक्त गरेको हो। कोरोना अपडेट लाइभबाट चर्चित बनेका प्रवक्ता देवकोटालाई मन्त्रालयले गुणस्तर तथा नियमन महाशाखाकाको प्रमुख बनाएको छ। २०७६ चैत ११ गतेदेखि २०७७ जेठ २५ गतेसम्म लगातार ७६ दिनसम्म दैनिक अपडेटमा उपस्थित भएका देवकोटा आइतबार बिदा भएका हुन्। लाइभ अपडेटमै पत्रकार, मिडिया, स्वास्थ्यमन्त्री र सहयोगी सबैलाई धन्यवाद दिँदै देवकोटा भावुक हुँदै बिदा भए।
देवकोटाले यो अवधिमा आफूले धेरै कुरा सिकेकोसमेत बताए। ‘२०७६ चैत ११ गतेदेखि ७६ दिन लाइभ अपडेटमा उपस्थित भएँ। यो अवधिमा मैले धेरै कुरा सिकेको छु ’, देवकोटाले मिडियाकर्मीलाई धन्यवाद दिँदै भने, ‘मैले फोन उठाउन नपाएको गुनासो धेरैले गर्नुहुन्छ। परिस्थिति त्यस्तै थियो भनेर बुझिदिनुहुन अनुरोध गर्छु।’ देवकोटाले आफ्नो जिम्मेवारी हेरफेर भएको र नयाँ जिम्मेवारीमा गएको लाइभ अपडेटमै जानकारी दिएका हुन्। ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट मेरो जिम्मेवारी हेरफेर भएको छ। अब म गुणस्तर तथा नियमन महाशाखाकाको प्रमुखको रुपमा काम गर्नेछु’, उनले आफू बिदा भएकोबारे जानकारी दिँदै भने, ‘प्रवक्ताको रुपमा हाल परोपकार प्रसूति अस्पतालका निर्देशक डा. जागेश्वर गौतमले जिम्मेवारी सम्हाल्नु हुनेछ। उहाँ भोलिदेखि लाइभ अपडेटमा आउनु हुनेछ।’
लाइभ अपडेट निरन्तर हुने भन्दै उनले नयाँ प्रवक्तालाई सहयोग गर्नसमेत आग्रह गरे। ‘लाइभ व्यवस्था गर्न मन्त्री, राज्यमन्त्री र साथीहरुको योगदान छ। हामीले सुरु गर्यौँ। निरन्तर सहयोग गरिदिनुहोला। देवकोटाले अन्तिममा भने, ‘यहाँहरुबाट अबदेखि प्रवक्ताको रुपमा लाइभमाबाहेक अन्य हिसाबले जोडिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद ।’